ဈေးကြီးဇိမ်ခံကားတွေကို မစီးကြတဲ့ ဘီလီယံနာများ - CantWait2Say
လူချမ်းသာတွေအတွက် မော်တော်ယာဉ်တွေဟာ သူတို့ရဲ့ကြွယ်ဝမှုအဆင့်အတန်းကို ပြသဖို့ အကောင်းဆုံး ကိရိယာတွေပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဒေါ်လာသန်းထောင်ချီချမ်းသာနေတဲ့ ဘီလီယံနာ လုပ်ငန်းရှင်တိုင်း ဇိမ်ခံကားစီးနေတာတော့ မဟုတ်ပါဘူး။ ပြောချင်လွန်းလို့က ဒီတစ်ခါ အဆမတန်ချမ်းသာပေမယ့် မထောင်လွှားတဲ့ ဘီလီယံနာတစ်ချို့ကို ဖော်ပြပေးပါရစေ။
၁. Alice Walton
Walmart ဆိုတာဟာ အမေရိကန်နိုင်ငံရဲ့ ဟိုက်ပါမားကက်ကြီးပေါင်းများစွာကို ပိုင်ဆိုင်တဲ့ လုပ်ငန်းစုပါ။ Alice Walton ကတော့ Walmart ရဲ့ ပူးတွဲဆက်ခံသူဖြစ်ပြီး ဒေါ်လာ ၄၅ ဘီလီယံတောင် ပိုင်ဆိုင်ပါတယ်။ သူမအတွက် ဖာရာရီတံဆိပ်ဆိုတာ အင်မတန်ပေါတယ်လို့ ပြောလို့ရတဲ့ အဆင့်ဖြစ်ပေမယ့် 2096 Ford F-150 King Ranch ကိုသာ ရွေးချယ်စီးနင်းပါတယ်။ သူမရဲ့ရွေးချယ်မှုက တန်ဖိုးထက် စိတ်ခံစားမှုအပေါ် မူတည်တာ ဖြစ်ပြီး သူမရဲ့ဖခင်ဟာ သူမငယ်ငယ်က 1979 Ford F-150 မော်ဒယ်ကို စီးနင်းခဲ့လို့ဖြစ်ပါတယ်။
၂. Mark Zuckerberg
ကမ္ဘာပေါ်မှာမသိသူမရှိသလောက်အောင်မြင်ကျော်ကြားလာပြီဖြစ်တဲ့ Facebook ရဲ့ပိုင်ရှင် ဇူကာဘတ်ဟာ အပြင်ပန်းအမြင်မှာတင် အရောင်မှိုင်းတီရှပ်တွေကိုသာ ဝတ်ဆင်တတ်လို့ မထောင်လွှားတတ်မှန်း လူသိပြီးသားပါ။ လုပ်ငန်းတွေကို အလောတကြီးချဲ့ထွင်တတ်တဲ့သူဟာ ကားကိုတော့ ဒေါ်လာသုံးသောင်းသာ တန်တဲ့ Acura TSX လေးကို စီးပါတယ်။ သူက ဒီကားလေးကို သက်တောင့်သက်သာရှိပြီး သူများအထင်ကြီးအောင် ကြွားဝါတဲ့ ပုံမပေါက်လို့ နှစ်သက်တာဖြစ်ကြောင်း ဖြေဆိုခဲ့ပါတယ်။
၃. Steve Ballmer
မိုက်ကရိုဆော့ဖ်ရဲ့အမှုဆောင်အရာရှိချုပ်ဟောင်း Steve Ballmer ကို ဘက်စကက်ဘောပရိသတ်တွေက L.A Clippers အသင်းပိုင်ရှင်အဖြစ် သိကြပါတယ်။ ဒီလောက်ကျော်ကြားအောင်မြင်ချမ်းသာနေတဲ့ စတိဗ်ဟာ ကားကိုတော့ ဒေါ်လာ ၂၈၀၀၀ သာတန်တဲ့ 2010 Ford Fusion Hybrid ကိုစီးနင်းပါတယ်။ သူ့ရဲ့ အကြောင်းပြချက်က Alice Walton နဲ့တူညီပါတယ်။ သူ့ဖခင်ဟာ ဖိုဒ့်ကားစက်ရုံမန်နေဂျာတစ်ဦးဖြစ်ခဲ့တာကြောင့် တစ်သက်လုံး ဖိုဒ့်ကားတွေကိုပဲ ဝယ်ယူစီးနင်းလေ့ရှိပါတယ်။
၄. Ingvar Kampard
Walmart လိုပဲ ကမ္ဘာအရပ်ရပ်ကတောင် သိရတဲ့ အမှတ်တံဆိပ်နောက်တစ်ခုက IKEA ပါ။ IKEA ရဲ့ တည်ထောင်သူကတော့ Ingvar Kampard ပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလူကြီးဟာ အင်မတန်ချမ်းသာပေမယ့် အဝတ်အစားကို တစ်ပတ်ရစ်တောင် ဝယ်ဝတ်လေ့ရှိတယ်လို့ ကျော်ကြားတယ်။ သူ့ရဲ့စီးတော်ယာဉ် 1993 ခုနှစ်ထုတ် Volvo 240 GL ကို နှစ်ပေါင်း ၂၀ နီးပါး အသုံးပြုခဲ့တာပါ။ သူ့မိတ်ဆွေတစ်ယောက်က ဒီကားဟာ အန္တရာယ်ရှိလောက်တဲ့အထိ အိုမင်းနေပြီဖြစ်ကြောင်း သူ့ကိုပြောဆိုနားသွင်းနိုင်ခဲ့တော့မှ တခြားကားသစ်တစ်စီးကို လဲလှယ်ခဲ့ပါတယ်။
၅. Warren Buffett
ချွေတာမှုနဲ့ပတ်သက်လာရင်တော့ ကမ္ဘာ့ထိပ်သီးအချမ်းသာဆုံးစာရင်းဝင်တစ်ယောက်လည်းဖြစ်တဲ့ Warren ကို ယှဉ်နိုင်တဲ့လူရှားပါတယ်။ နှစ်ပေါင်းများစွာ ဘီလီယံနာအဖြစ် ရပ်တည်လာပေမယ့် မနက်စာကို မက်ဒေါ်နယ်ဆိုင်က မှာစားတတ်တဲ့သူမျိုးပါ။ သူဟာ 2006 မော်ဒယ် Cadillac DTS လေးကို ဆယ်နှစ်လောက် အသုံးပြုခဲ့ပြီး သမီးဖြစ်သူက အတင်းအကျပ်တိုက်တွန်းတော့မှ ဒေါ်လာလေးသောင်းခွဲလောက်ကျတဲ့ Cadillac XTS ကိုပြောင်းစီးပါတယ်။ ဖောဘီးမဂ္ဂဇင်းနဲ့ အင်တာဗျူးထဲမှာ “ကျုပ်က တစ်နှစ်လုံးမှ မိုင် ၃၅၀၀ လောက်ပဲ မောင်းတာဆိုတော့ ကားခဏခဏလဲတာတော့ လုပ်မှာမဟုတ်ဘူး” လို့ ဖြေခဲ့ပါတယ်။
လူခမျြးသာတှအေတှကျ မျောတျောယာဉျတှဟော သူတို့ရဲ့ကွှယျဝမှုအဆငျ့အတနျးကို ပွသဖို့ အကောငျးဆုံး ကိရိယာတှပေဲ ဖွဈပါတယျ။ ဒါပမေယျ့ ဒျေါလာသနျးထောငျခြီခမျြးသာနတေဲ့ ဘီလီယံနာ လုပျငနျးရှငျတိုငျး ဇိမျခံကားစီးနတောတော့ မဟုတျပါဘူး။ ပွောခငျြလှနျးလို့က ဒီတဈခါ အဆမတနျခမျြးသာပမေယျ့ မထောငျလှားတဲ့ ဘီလီယံနာတဈခြို့ကို ဖျောပွပေးပါရစေ။
Walmart ဆိုတာဟာ အမရေိကနျနိုငျငံရဲ့ ဟိုကျပါမားကကျကွီးပေါငျးမြားစှာကို ပိုငျဆိုငျတဲ့ လုပျငနျးစုပါ။ Alice Walton ကတော့ Walmart ရဲ့ ပူးတှဲဆကျခံသူဖွဈပွီး ဒျေါလာ ၄၅ ဘီလီယံတောငျ ပိုငျဆိုငျပါတယျ။ သူမအတှကျ ဖာရာရီတံဆိပျဆိုတာ အငျမတနျပေါတယျလို့ ပွောလို့ရတဲ့ အဆငျ့ဖွဈပမေယျ့ 2096 Ford F-150 King Ranch ကိုသာ ရှေးခယျြစီးနငျးပါတယျ။ သူမရဲ့ရှေးခယျြမှုက တနျဖိုးထကျ စိတျခံစားမှုအပျေါ မူတညျတာ ဖွဈပွီး သူမရဲ့ဖခငျဟာ သူမငယျငယျက 1979 Ford F-150 မျောဒယျကို စီးနငျးခဲ့လို့ဖွဈပါတယျ။
ကမ်ဘာပျေါမှာမသိသူမရှိသလောကျအောငျမွငျကြျောကွားလာပွီဖွဈတဲ့ Facebook ရဲ့ပိုငျရှငျ ဇူကာဘတျဟာ အပွငျပနျးအမွငျမှာတငျ အရောငျမှိုငျးတီရှပျတှကေိုသာ ဝတျဆငျတတျလို့ မထောငျလှားတတျမှနျး လူသိပွီးသားပါ။ လုပျငနျးတှကေို အလောတကွီးခြဲ့ထှငျတတျတဲ့သူဟာ ကားကိုတော့ ဒျေါလာသုံးသောငျးသာ တနျတဲ့ Acura TSX လေးကို စီးပါတယျ။ သူက ဒီကားလေးကို သကျတောငျ့သကျသာရှိပွီး သူမြားအထငျကွီးအောငျ ကွှားဝါတဲ့ ပုံမပေါကျလို့ နှဈသကျတာဖွဈကွောငျး ဖွဆေိုခဲ့ပါတယျ။
မိုကျကရိုဆော့ဖျရဲ့အမှုဆောငျအရာရှိခြုပျဟောငျး Steve Ballmer ကို ဘကျစကကျဘောပရိသတျတှကေ L.A Clippers အသငျးပိုငျရှငျအဖွဈ သိကွပါတယျ။ ဒီလောကျကြျောကွားအောငျမွငျခမျြးသာနတေဲ့ စတိဗျဟာ ကားကိုတော့ ဒျေါလာ ၂၈၀၀၀ သာတနျတဲ့ 2010 Ford Fusion Hybrid ကိုစီးနငျးပါတယျ။ သူ့ရဲ့ အကွောငျးပွခကျြက Alice Walton နဲ့တူညီပါတယျ။ သူ့ဖခငျဟာ ဖိုဒျ့ကားစကျရုံမနျနဂြောတဈဦးဖွဈခဲ့တာကွောငျ့ တဈသကျလုံး ဖိုဒျ့ကားတှကေိုပဲ ဝယျယူစီးနငျးလရှေိ့ပါတယျ။
Walmart လိုပဲ ကမ်ဘာအရပျရပျကတောငျ သိရတဲ့ အမှတျတံဆိပျနောကျတဈခုက IKEA ပါ။ IKEA ရဲ့ တညျထောငျသူကတော့ Ingvar Kampard ပဲဖွဈပါတယျ။ ဒီလူကွီးဟာ အငျမတနျခမျြးသာပမေယျ့ အဝတျအစားကို တဈပတျရဈတောငျ ဝယျဝတျလရှေိ့တယျလို့ ကြျောကွားတယျ။ သူ့ရဲ့စီးတျောယာဉျ 1993 ခုနှဈထုတျ Volvo 240 GL ကို နှဈပေါငျး ၂၀ နီးပါး အသုံးပွုခဲ့တာပါ။ သူ့မိတျဆှတေဈယောကျက ဒီကားဟာ အန်တရာယျရှိလောကျတဲ့အထိ အိုမငျးနပွေီဖွဈကွောငျး သူ့ကိုပွောဆိုနားသှငျးနိုငျခဲ့တော့မှ တခွားကားသဈတဈစီးကို လဲလှယျခဲ့ပါတယျ။
ခြှတောမှုနဲ့ပတျသကျလာရငျတော့ ကမ်ဘာ့ထိပျသီးအခမျြးသာဆုံးစာရငျးဝငျတဈယောကျလညျးဖွဈတဲ့ Warren ကို ယှဉျနိုငျတဲ့လူရှားပါတယျ။ နှဈပေါငျးမြားစှာ ဘီလီယံနာအဖွဈ ရပျတညျလာပမေယျ့ မနကျစာကို မကျဒျေါနယျဆိုငျက မှာစားတတျတဲ့သူမြိုးပါ။ သူဟာ 2006 မျောဒယျ Cadillac DTS လေးကို ဆယျနှဈလောကျ အသုံးပွုခဲ့ပွီး သမီးဖွဈသူက အတငျးအကပျြတိုကျတှနျးတော့မှ ဒျေါလာလေးသောငျးခှဲလောကျကတြဲ့ Cadillac XTS ကိုပွောငျးစီးပါတယျ။ ဖောဘီးမဂ်ဂဇငျးနဲ့ အငျတာဗြူးထဲမှာ “ကြုပျက တဈနှဈလုံးမှ မိုငျ ၃၅၀၀ လောကျပဲ မောငျးတာဆိုတော့ ကားခဏခဏလဲတာတော့ လုပျမှာမဟုတျဘူး” လို့ ဖွခေဲ့ပါတယျ။